အမြင့်ဆုံးပေးချေမှုခံရသောမင်းသမီးများ ၂၀၁၅: ဂျနီဖာလောရင့်နံပါတ် ၁ တွင် - Netflix သတင်း
အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ခံရသည့်မင်းသမီးများ ၂၀၁၅ - Hunger Games ကြယ်ဂျနီဖာလောရင့်သည်ဒေါ်လာ ၅၂ သန်းရရှိခဲ့သည်
အံ့’s ခြင်းရဲ့ Daredevil ရာသီ 2: Daredevil တစ်ခုအဆင့်မြှင့်ဝတ်စုံရရှိသွားတဲ့ 'လမ်းလျှောက်နေသောလူသေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း' - 'The Walking Dead' ၏လှည့်ဖျားမှုကိုပထမ ၃ မိနစ်စောင့်ကြည့်ပါ (ဗီဒီယို) Netflix သတင်း က ပက်ထရစ် Schmidt က လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @PatrickASchmidt ကိုလိုက်နာပါ
ယခုနှစ်အတွက် ၀ င်ငွေအမြင့်မားဆုံးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Hunger Games နှင့် X-Men ကြယ်ပွင့်ဂျနီဖာလောရင့်က ၂၀၁၅ တွင်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
ဂျနီဖာလောရင့်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူမအားကမ္ဘာပေါ်တွင်လခအမြင့်မားဆုံးသောမင်းသမီးဖြစ်ခြင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၅၂ သန်းရရှိခဲ့သည်ဟု Forbes မဂ္ဂဇင်း လေ့လာချက်။ ကြယ်ပွင့် Hunger Games နှင့် X-Men ရုပ်ရှင်များသည်သူမ၏ဝင်ငွေကိုဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ် Dior နှင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
သူမသည်မကြာသေးမီက 25 နှစ်နှင့်အတူ Hunger Games: Mockingjay အပိုင်း ၂ ဖြန့်ချိခံရဖို့နေဆဲ, လောရင့်ဟောလိဝုဒ်အတွက်လက်ရှိ '' က '' မိန်းကလေးအဖြစ်လာရန်နှစ်ပေါင်းထိပ်ထိပ်ဖြစ်ဖို့သေချာသည်။
Related: Netflix ရှိဂျနီဖာလောရင့်ရုပ်ရှင်တိုင်းကိုကြည့်ပါ
လောရင့်သည်ဒေါ်လာ ၃၅.၅ သန်းဖြင့်ဒုတိယနေရာတွင် Scarlett Johansson သည်ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နေသည် Avengers: ခေတ်၏ Ultron ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေကြီးမားတဲ့ပိုက်ဆံအလုပ်။ သူမလည်းရှိခဲ့သည် လူစီ နှင့်သူမ၏ထောက်ခံချက်အပေးအယူ Dolce & Gabbana နှင့် Sodastream ပါဝင်သည်။
သူလျှို ကြယ်ပွင့် Melissa McCarthy ကဒေါ်လာ ၂၃ သန်းဖြင့်ထိပ်ဆုံးနံပါတ်သုံးနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
lucifer ရာသီ5netflix လာမယ့်အခါ
Forbes မဂ္ဂဇင်းနှင့်အမြင့်မားဆုံးလစာသရုပ်ဆောင်များစာရင်းအရသင်အမြင့်ဆုံးပေးချေသောမင်းသမီးစာရင်းအပြည့်အစုံကိုတွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ ။
၁။ ဂျနီဖာလောရင့် - ဒေါ်လာ ၅၂ သန်း
2. Scarlett Johansson- ဒေါ်လာ ၃၅.၅ သန်း
၃။ Melissa McCarthy - ဒေါ်လာ ၂၃ သန်း
4. Bingbing Fan - ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း
၅။ ဂျနီဖာအနစ္စတန် - ဒေါ်လာ ၁၆.၅ သန်း
၆။ ဂျူလီယာရောဘတ် - ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း
၇။ Angelina Jolie-Pitt- ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း
၈ ။ Reese Witherspoon - ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း
၉။ အန်းဟတ်ဝေး - ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း
တော်ဝင်ဝဒေနာရာသီ Netflix 8
၁၀ ။ Kristen Stewart - ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း
၁၁။ ကင်မရွန်ဒီဇက် - ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း
၁၂ ။ Gwyneth Paltrow- ဒေါ်လာ ၉ သန်း
၁၃။ Meryl Streep- ဒေါ်လာ ၈ သန်း
၁၄. Amanda Seyfried - ဒေါ်လာ ၈ သန်း
15. စန်ဒရာ Bullock- $ 8 သန်း
၁၆။ Emma Stone- ဒေါ်လာ ၆.၅ သန်း
၁၇ Mila Kunis - ဒေါ်လာ ၆.၅ သန်း
၁၈။ Natalie Portman - ဒေါ်လာ ၆ သန်း
ဘယ်အချိန်လိမ္မော်ရောင်အသစ်ကအနက်ရောင်ရာသီ6ဖြစ်ပါတယ် netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
အားလုံးထွက်ရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
အားလုံး American Spencer နှင့် Olivia
ahs အစွန်းရောက် Netflix အပေါ်ထွက်လာကြပါဘူးသည့်အခါ